ရဖွေငျ့ သငျ့ကနျြးမာရေးကိုတညျဆောကျပါ – Sunthit Myanmar
“ရေ“လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုက ယနေ့အထိပေါ့ပေါ့တန်တန်ပင်သဘောထားနေကြဆဲပါပဲ။ တကယ်တော့ ကျနော်တို့တွေအတွက် သောက်သုံးရေ ရှားပါးမှု ပြသနာဟာ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ စိန်ခေါ်လာနေပြီဆိုတာသိကြရမယ့် အချိန်ရောက်ပါပြီ။ ဘာကြောင့်လဲ။ ကျနော်တို့အားလုံးဟာ ကမ္ဘာကြီးပူနွေး လာမှုနဲ့အတူ သဘာဝအန္တရာယ်ကျရောက်မှု အဆိုးရွားဆုံးနိုင်ငံစက်ကွင်းထဲသို့ ရောက်နေကြတဲ့ သူတွေမို့လို့ ပါပဲ။ရေရဲ့တန်ဖိုးကို ရေရှားတဲ့နေရာတွေ၊ရေဝယ်သုံးနေရတဲ့နိုင်ငံနဲ့ဒေသတွေကို ရောက်ဖူးမှ ကောင်းကောင်း နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တန်ဖိုးကိုသိမှ တန်ဖိုးဆိုတာရှိလာမှာပါ။
ရေဟာအသက်ရှင်သန်ရေးအတွက် အရေးပါတာကိုတော့ လူတိုင်းနီးပါးသိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲ လူအများစုက အသက်ရှင်သန်ရေးအတွက် ရေကိုသောက်သုံးကြရမယ်ဆိုတာလည်းသိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူ့ခန္ဓာသဘာဝအရ ရေလိုအပ်ချက် ရှိလာလို့ ရေဆာမှ၊ရေငတ်မှ ရေကိုသတိရကြသူများထဲမှာ ကျနော်တို့အများစုပါဝင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ရေဟာ လူသားတွေရဲ့ အသက်ရှင်သန်ရေးသာမက အနာရောဂါကင်းဝေးပြီး သက်ရှည်ကျန်းမာဖို့အတွက် အရေးပါဆုံးအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သိတဲ့သူ နည်းပါလိမ့်မယ်။
ရေရဲ့တန်ဖိုးဟာ ကြီးမားလွန်းတာကြောင့် ရေလှူရင် မတောင်းတဘဲ အကျိုး(၁၀)ပါး ကိုရတယ်လို့ မြတ်ဗုဒ္ဓက ဟောဖေါ်ညွှန်ပြခဲ့ပါတယ်။ လျင်မြန်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း၊ကျော်ကြားခြင်း၊ ဆာလောင်ကင်းခြင်း၊အခြွေအရံများခြင်း၊ အသက်ရှည်ခြင်း၊ အဆင်းလှခြင်း၊ ချမ်းသာကြီးခြင်း၊ ခွန်အားကြီးခြင်းနဲ့ ဉာဏ်ပညာကြီးခြင်း ဆိုတဲ့ အကျိုးဆယ်ပါးပါ။ ကျနော်တို့တွေဟာ ဒီလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရေကို အမှန်တကယ် တန်ဖိုးရှိအောင်သုံးတတ်ပြီလားလို့မေးရင် အများစုကတော့ ခေါင်းခါကြရမှာအမှန်ပါ။ ကျနော်တို့ကျန်းမာရေးအတွက် အဝေးမှာရှိနေတဲ့ အခြားအာဟာရ အစားအစာတွေကို မွှေနှောက်ရှာဖွေနေမယ့်အစား လက်တကမ်းကရေကိုပဲ စနစ်ကျအောင်အသုံးပြုကြည့်လိုက်ပါဦး။
သင်သိရမယ့် ရေကပေးသော အကျိုးဆယ်ပါး
ရေဟာလူသားတွေအတွက် ဘယ်လောက်တောင် အစွမ်းရှိသလဲဆိုတာ အောက်ပါ အကျိုးတရား ဆယ်ပါးနဲ့ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
(၁) အရေပြားအောက်မှာအဆီအိတ်တွေကြောင့် အသားအရေပွဖောင်းနေတဲ့ Cellulite ကို ကာကွယ်ကုသပေးနိုင်တယ်။( Treats and prevents cellulite)
(၃) ဆံပင်ကိုတောက်ပြောင်စေတယ်။(Shiny hair)
(၄) စွမ်းအင်ကို ပေးတယ်။(Give energy)
(၅) ကယ်လိုရီစားသုံးမှုကို လျှော့ချပေးတယ်။( Reduce calorie intake)
(၆) ရောဂါပိုးမွှားများကို ကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်တယ်။(Wards off disease and infection)
(၇) အရေပြားကို လင်းလက်တောက်ပစေသည်။( Glowy skin)
(၈) အာဟာရများကို အလွယ်တကူစုပ်ယူနိုင်စေတယ်။(Nutrients are easier to absorb)
(၉)လက်သည်းခြေသည်းများကို ခိုင်မာစေတယ်။( Healthy strong nails)
(၁၀) အစာချေဖျက်မှုကို အထောက်အကူပြုတယ်။( Digestive aid)
ဒါတင်မကပါဘူး။ရေဟာ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချဖို့အတွက် လျှို့ဝှက်လက်နက်တစ်ခုဆိုတာလည်း သိစေချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ပါလဲ။ အောက်ပါအချက်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၁) ရေမှာလူကိုဝစေတဲ့ ကယ်လိုရီလုံးဝမပါပါဘူး။( Water contains zero calories.)
(၂) ရေက ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ဇီဝကမဖြစ်စဉ်တွေကို မြှင့်တင်ပေးတယ်။(Water boosts your metabolism.)
(၃) ရေက အစာစားချင်စိတ်ကို လျှော့ချပေးတယ်။ (Water lowers your appetite.)
(၄) ရေက ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းပိုင်းမှာ ရေပိုတွေကို သိမ်းထားတာမျိုးကို လျောကျစေတယ်။(Water decreases water retention)
(၅) ရေက အာသာပြင်းပြမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ကူညီပေးတယ်။(Water helps to minimize craving.)
(၆) ရေက စွမ်းအင်အဆင့်မြင့်မားမှုကို ထိန်းပေးတယ်။(Water keeps your energy kevel high.)
ဒီလောက်အစွမ်းရှိတဲ့ ရေကို ဆာလောင်မှ၊ရေငတ်မှထပ်ဖြည့်နေကြတဲ့ ကျနော်တို့တွေ ဟာ တကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် သနားစရာကောင်းလှပါတယ်။ မသိမှုဟာ လောကမှာ အင်မတန်ကြောက်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ကဲဒါဆိုရင် တစ်နေ့တာမှာ ရေကို အကျိုးရှိအောင်ဘယ်လိုသောက်ကြမလဲ။
(၁) အိပ်ရာကထတာနဲ့ ရေ ဖန်ခွက်နဲ့ (၂)ခွက်သောက်ပြီး အတွင်းက ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေကိုရှင်းလိုက်ပါ။
(၂)အစာချေဖျက်ရာမှာ အကူအညီရဖို့ အစာမစားမီ နာရီဝက်ကြိုပြီး ရေ တစ်ဖန်ခွက်သောက်ပါ။
(၃) သွေးဖိအားကို ကျဆင်းစေဖို့အတွက် ရေမချိုးမီ ရေ တစ်ဖန်ခွက်သောက်ပါ။
(၄) နှလုံးတိုက်ခိုက်မှု မခံရဖို့အတွက် အိပ်ရာမဝင်မီ ရေတစ်ဖန်ခွက်သောက်ပါ။
ဒီတစ်ခါတော့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သောက်ရုံတင်မကဘဲ သုံးတတ်ရုံဖြင့် မိမိရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အကျိုးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကို တင်ပြချင်ပါတယ်။အဲဒါတွေကတော့၊
မနက်အိပ်ရာထပြီးမျက်နှာမသစ်၊သွားမတိုက်မီ ဒူးခေါင်းအောက်ပိုင်းကို ရေများများလောင်းချဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ခေါင်းကိုက်ခေါင်းမူးဝေဒနာများနှင့် အမြင်အာရုံအတွက် အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။
အပြင်မှလာပြီး ချက်ချင်းခေါင်းပေါ်မှရေလောင်းမချိုးဖို့နဲ့ ရေချိုးသောအခါ အောက်ပိုင်းမှစပြီးရေလောင်းချိုးဖို့ အကြံပြုအပ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံတော့ စာဖတ်သူက ကဲ ဒါဆိုရင် တစ်နေ့ကို ရေဘယ်လောက်သောက်ရမလဲလို့ မေးချင်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်လီတာရေသန့်ဗူးတွေထုတ်လုပ်နေကြတဲ့ခေတ်မှာ ရေသန့်ဗူးနဲ့ ပြောရင် အားလုံးအတွက် အဆင် ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ ကဲမိတ်ဆွေ တစ်နေ့ကို တစ်လီတာဝင်ရေသန့်ဗူး(၂)ဗူးသာ ကုန်အေင် သောက်လိုက်ပါတော့။ရေကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချရင်း ကျန်းမာတဲ့ ပြည်သူတွေဖြစ်ကြပါစေ။
Unicode : ရေဖြင့် သင့်ကျန်းမာရေးကိုတည်ဆောက်ပါ
“ရေ“လို့ ဆိုလိုကျတာနဲ့ မွနျမာနိုငျငံသားအမြားစုက ယနအေ့ထိပေါ့ပေါ့တနျတနျပငျသဘောထားနကွေဆဲပါပဲ။ တကယျတော့ ကနြျောတို့တှအေတှကျ သောကျသုံးရေ ရှားပါးမှု ပွသနာဟာ တဈနထေ့ကျတဈနေ့ စိနျချေါလာနပွေီဆိုတာသိကွရမယျ့ အခြိနျရောကျပါပွီ။ ဘာကွောငျ့လဲ။ ကနြျောတို့အားလုံးဟာ ကမ်ဘာကွီးပူနှေး လာမှုနဲ့အတူ သဘာဝအန်တရာယျကရြောကျမှု အဆိုးရှားဆုံးနိုငျငံစကျကှငျးထဲသို့ ရောကျနကွေတဲ့ သူတှမေို့လို့ ပါပဲ။ရရေဲ့တနျဖိုးကို ရရှေားတဲ့နရောတှေ၊ရဝေယျသုံးနရေတဲ့နိုငျငံနဲ့ဒသေတှကေို ရောကျဖူးမှ ကောငျးကောငျး နားလညျနိုငျပါလိမျ့မယျ။ တနျဖိုးကိုသိမှ တနျဖိုးဆိုတာရှိလာမှာပါ။
ရဟောအသကျရှငျသနျရေးအတှကျ အရေးပါတာကိုတော့ လူတိုငျးနီးပါးသိကွပါတယျ။ဒါကွောငျ့လဲ လူအမြားစုက အသကျရှငျသနျရေးအတှကျ ရကေိုသောကျသုံးကွရမယျဆိုတာလညျးသိကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လူ့ခန်ဓာသဘာဝအရ ရလေိုအပျခကျြ ရှိလာလို့ ရဆောမှ၊ရငေတျမှ ရကေိုသတိရကွသူမြားထဲမှာ ကနြျောတို့အမြားစုပါဝငျပါတယျ။ တကယျတော့ ရဟော လူသားတှရေဲ့ အသကျရှငျသနျရေးသာမက အနာရောဂါကငျးဝေးပွီး သကျရှညျကနျြးမာဖို့အတှကျ အရေးပါဆုံးအရာဖွဈတယျဆိုတာကိုတော့ သိတဲ့သူ နညျးပါလိမျ့မယျ။
ရရေဲ့တနျဖိုးဟာ ကွီးမားလှနျးတာကွောငျ့ ရလှေူရငျ မတောငျးတဘဲ အကြိုး(၁၀)ပါး ကိုရတယျလို့ မွတျဗုဒ်ဓက ဟောဖျေါညှနျပွခဲ့ပါတယျ။ လငျြမွနျခွငျး၊ သနျ့ရှငျးစငျကွယျခွငျး၊ကြျောကွားခွငျး၊ ဆာလောငျကငျးခွငျး၊အခွှအေရံမြားခွငျး၊ အသကျရှညျခွငျး၊ အဆငျးလှခွငျး၊ ခမျြးသာကွီးခွငျး၊ ခှနျအားကွီးခွငျးနဲ့ ဉာဏျပညာကွီးခွငျး ဆိုတဲ့ အကြိုးဆယျပါးပါ။ ကနြျောတို့တှဟော ဒီလောကျတနျဖိုးရှိတဲ့ရကေို အမှနျတကယျ တနျဖိုးရှိအောငျသုံးတတျပွီလားလို့မေးရငျ အမြားစုကတော့ ခေါငျးခါကွရမှာအမှနျပါ။ ကနြျောတို့ကနျြးမာရေးအတှကျ အဝေးမှာရှိနတေဲ့ အခွားအာဟာရ အစားအစာတှကေို မှနှေောကျရှာဖှနေမေယျ့အစား လကျတကမျးကရကေိုပဲ စနဈကအြောငျအသုံးပွုကွညျ့လိုကျပါဦး။
သငျသိရမယျ့ ရကေပေးသော အကြိုးဆယျပါး
ရဟောလူသားတှအေတှကျ ဘယျလောကျတောငျ အစှမျးရှိသလဲဆိုတာ အောကျပါ အကြိုးတရား ဆယျပါးနဲ့ရှငျးပွခငျြပါတယျ။
(၁) အရပွေားအောကျမှာအဆီအိတျတှကွေောငျ့ အသားအရပှေဖောငျးနတေဲ့ Cellulite ကို ကာကှယျကုသပေးနိုငျတယျ။( Treats and prevents cellulite)
(၃) ဆံပငျကိုတောကျပွောငျစတေယျ။(Shiny hair)
(၄) စှမျးအငျကို ပေးတယျ။(Give energy)
(၅) ကယျလိုရီစားသုံးမှုကို လြှော့ခပြေးတယျ။( Reduce calorie intake)
(၆) ရောဂါပိုးမှားမြားကို ကာကှယျတားဆီးပေးနိုငျတယျ။(Wards off disease and infection)
(၇) အရပွေားကို လငျးလကျတောကျပစသေညျ။( Glowy skin)
(၈) အာဟာရမြားကို အလှယျတကူစုပျယူနိုငျစတေယျ။(Nutrients are easier to absorb)
(၉)လကျသညျးခွသေညျးမြားကို ခိုငျမာစတေယျ။( Healthy strong nails)
(၁၀) အစာခဖြေကျြမှုကို အထောကျအကူပွုတယျ။( Digestive aid)
ဒါတငျမကပါဘူး။ရဟော ကိုယျအလေးခြိနျလြှော့ခဖြို့အတှကျ လြှို့ဝှကျလကျနကျတဈခုဆိုတာလညျး သိစခေငျြပါတယျ။ဘာကွောငျ့ပါလဲ။ အောကျပါအခကျြတှကွေောငျ့ပဲဖွဈပါတယျ။
(၁) ရမှောလူကိုဝစတေဲ့ ကယျလိုရီလုံးဝမပါပါဘူး။( Water contains zero calories.)
(၂) ရကေ ကိုယျခန်ဓာရဲ့ဇီဝကမဖွဈစဉျတှကေို မွှငျ့တငျပေးတယျ။(Water boosts your metabolism.)
(၃) ရကေ အစာစားခငျြစိတျကို လြှော့ခပြေးတယျ။ (Water lowers your appetite.)
(၄) ရကေ ကိုယျခန်ဓာအတှငျးပိုငျးမှာ ရပေိုတှကေို သိမျးထားတာမြိုးကို လြောကစြတေယျ။(Water decreases water retention)
(၅) ရကေ အာသာပွငျးပွမှုကို အနညျးဆုံးဖွဈအောငျကူညီပေးတယျ။(Water helps to minimize craving.)
(၆) ရကေ စှမျးအငျအဆငျ့မွငျ့မားမှုကို ထိနျးပေးတယျ။(Water keeps your energy kevel high.)
ဒီလောကျအစှမျးရှိတဲ့ ရကေို ဆာလောငျမှ၊ရငေတျမှထပျဖွညျ့နကွေတဲ့ ကနြျောတို့တှေ ဟာ တကယျစဉျးစားကွညျ့မယျဆိုရငျ သနားစရာကောငျးလှပါတယျ။ မသိမှုဟာ လောကမှာ အငျမတနျကွောကျစရာ ကောငျးပါတယျ။ ကဲဒါဆိုရငျ တဈနတေ့ာမှာ ရကေို အကြိုးရှိအောငျဘယျလိုသောကျကွမလဲ။
(၁) အိပျရာကထတာနဲ့ ရေ ဖနျခှကျနဲ့ (၂)ခှကျသောကျပွီး အတှငျးက ကိုယျခန်ဓာအစိတျအပိုငျးတှကေိုရှငျးလိုကျပါ။
(၂)အစာခဖြေကျြရာမှာ အကူအညီရဖို့ အစာမစားမီ နာရီဝကျကွိုပွီး ရေ တဈဖနျခှကျသောကျပါ။
(၃) သှေးဖိအားကို ကဆြငျးစဖေို့အတှကျ ရမေခြိုးမီ ရေ တဈဖနျခှကျသောကျပါ။
(၄) နှလုံးတိုကျခိုကျမှု မခံရဖို့အတှကျ အိပျရာမဝငျမီ ရတေဈဖနျခှကျသောကျပါ။
ဒီတဈခါတော့ နောကျဆုံးအနနေဲ့ သောကျရုံတငျမကဘဲ သုံးတတျရုံဖွငျ့ မိမိရဲ့ ကနျြးမာရေးကို အကြိုးပွုနိုငျတယျဆိုတာကို တငျပွခငျြပါတယျ။အဲဒါတှကေတော့၊
မနကျအိပျရာထပွီးမကျြနှာမသဈ၊သှားမတိုကျမီ ဒူးခေါငျးအောကျပိုငျးကို ရမြေားမြားလောငျးခဖြို့ အကွံပွုခငျြပါတယျ။ ခေါငျးကိုကျခေါငျးမူးဝဒေနာမြားနှငျ့ အမွငျအာရုံအတှကျ အထောကျအကူဖွဈပါတယျ။
အပွငျမှလာပွီး ခကျြခငျြးခေါငျးပျေါမှရလေောငျးမခြိုးဖို့နဲ့ ရခြေိုးသောအခါ အောကျပိုငျးမှစပွီးရလေောငျးခြိုးဖို့ အကွံပွုအပျပါတယျ။ နောကျဆုံတော့ စာဖတျသူက ကဲ ဒါဆိုရငျ တဈနကေို့ ရဘေယျလောကျသောကျရမလဲလို့ မေးခငျြပါလိမျ့မယျ။ တဈလီတာရသေနျ့ဗူးတှထေုတျလုပျနကွေတဲ့ခတျေမှာ ရသေနျ့ဗူးနဲ့ ပွောရငျ အားလုံးအတှကျ အဆငျ ပွမေယျထငျပါတယျ။ ကဲမိတျဆှေ တဈနကေို့ တဈလီတာဝငျရသေနျ့ဗူး(၂)ဗူးသာ ကုနျအငျေ သောကျလိုကျပါတော့။ရကေို အကြိုးရှိရှိအသုံးခရြငျး ကနျြးမာတဲ့ ပွညျသူတှဖွေဈကွပါစေ။
Published November 4, 2016 By staff
Categorized as Health, Lifestyle Tagged health, lifestyle, water